ခုလိုမျိုး အမှတ်တယ စာမျက်နှာလေး တစ်ခု ဖန်တီးပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Chiron Star said...
the only thing we can do is pray for him ,for his next life..........once he died as shwe phone lu ,he's coming back to the earth byawizard of words taryar min wai,now he's died as taryar min wai..........who will know how he will coming back to us??? ,asaleader ???or asagreat artist or ????
This is suchagreat loss to us. I am really sorry about that. I am big fan of him. His words, his poems, his ideas, and his stories will never die.
အစ်ကို့စာတွေကဗျာတွေ ဖတ်ရင်း အားကျပြီး စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ပိုရေးဖြစ်ခဲ့တာ။
တာရာမင်းဝေဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သာမန်ကြယ်တစ်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဓူဝံကြယ်တစ်လုံးပါ။
အစ်ကို သေဆုံးသွားပေမယ့် အစ်ကို့အနုပညာကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ အမြဲရှိနေဦးမှာပါ။
အစ်ကို ဆုံးပြီဆိုတာ အသေအချာ သိရတဲ့ညကတော့ ကောင်းကင်ကို ပြန် ပြန်တည့်ရတာ မောတယ်ဗျာ...။
မှာ Link ပေးခွင့်ပြုပါနော်
You always bright in our hearts
Lynn Khant Tha said...
သူ့ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ပရိတ်သတ်ဆီပုံအပ်